Damiir-xumo iyo dareen la’aan [Cumar Filish] | KEYDMEDIA ENGLISH
Damiir-xumo iyo dareen la’aan [Cumar Filish]
Cumar Filish, ayaa xalay diiday ka qeyb galka kulan loogu duceynayay AUN, Xildhibaan Aamino Maxamed, xilli ay xusid mudan tahay in uusan wali ka tacsiyen geerida Xildhibaanadda.
MUQDISHO, Soomaaliya – Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Filish, oo hore uga mid ahaa hoggaamiye kooxeedyadii arxanka darnaa ee Muqdisho burburiyay, ayaa wali fahmi la’ xilka uu hayo iyo muhiimadda kursigiisu u leeyahay bulshada Caasimadda.
Ma rumeysaneysaa in Cumar Filish, oo ku magacaaban xilka ugu sarreeya ee Gobolka Banaadir, uusan wali ka tacsiyeyn dilkii siyaasadeed ee AUN Xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi, loogu geystay xarunta gobolka Hiiraan ee Baladweyne.
Ma og tahay in Cumar Filish, uusan ka qeyb galin Salaaddii Janaasada ee ka dhacday garoonka Aadan Cadde iyo aaskii marxuumadda oo lagu duugay qabuuraha isbitaalka xoogga ee degmada Hodan ee gobalka uu Guddoomiyaha ka yahay.
Ma aaminee, in uusan saxiixin buugga tacsida, hal marna uusan ehelkeeda u muujin dareen madaxtinnimo, kaaga darane, side kaaga dhaadhacee inuu xalay diiday ka qeyb galka kulankii reer Muqdisho ugu duceynayeen marxuumadda.
Is-weydiintu, waa sababta uu Filish, intaas oo tallaabo uga baaqsaday, iyadoo ay xusid mudan tahay in wareysigii ugu danbeeyay oo ay bixisay AUN, Aamino, ay ku sheegtay in aysan waligeed melena uga bixin Gobolka Banaadir.
Si fudud, jawaabtu, waa in Fahad iyo Farmaajo, oo ka danbeeyay dilka Aamno, ay ku amreen in uusan ka tacsiyen karin, isla-markaana uusan tagi karin goob looga hadlayo dhimasahada Aamimo iyo dadkii lagu laayay Baladweyne.
Haddii damiir madaxtinnimo iyo dareen dadnimo jiraan, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, wuxuu ahaa musuulka ugu mudan ee garab istaagi lahaa qoyska dhibban, maadaama kuwa gabdhooda dilay ku sugan yihiin Muqdisho, sida uu xalay sheegay RW Rooble.
Filish, wuxuu ka mid yahay adeegayaasha Farmaajo, wuxuuna hore dadka Muqdisho ugu diiday in ay bannaan-baxyo nabadeed ku muujiyaan aragtidooda ka dhanka ah, kooxda u ooman daadin dhiigga dadka indha u ah bulshada gobolka Banaadir.